Magaalo ku taalla dal Carbeed oo dadka Muslimiinta ah aan loo oggoleyn inay guryo ka kireystaan | Biyoguurenews.com
Home Wararka Magaalo ku taalla dal Carbeed oo dadka Muslimiinta ah aan loo oggoleyn...
Magaalo ku taalla dal Carbeed oo dadka Muslimiinta ah aan loo oggoleyn inay guryo ka kireystaan
Qoys Muslimiin Shiico ah oo ku sugan dalka Lubnaan ayaa laga dalbaday inay ka baxaan guriga ay daganaayeen, maadaama guud ahaan xaafaddaas ay tahay mid ay ku nool yihiin dadka masiixiyiinta ah.
Maxamed, oo ah ninka lagu amray inuu raro qoyskiisa, wuxuu ku dhawaad labo sano ku noolaa guri ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada Hadath, balse markii uu isku dayay inuu diiwaan galiyo sharciga guriga, oo uu iibsado, waa laga diid ay.
“Waxaan u sheegay inaan ahay muwaadin reer Lubnaan ah. Qof walba oo Lubnaan u dhashayna wuxuu xaq u leeyahay inuu dago meel kasta oo ka mid ah dalka Lubnaan, hantina wuu ku yeelan karaa”, ayuu yiri Maxamed.
Ugu dambeyn Maxamed wuxuu ku khasbanaaday inuu ka guuro gurigaas, maadaama uu Muslim yahay, wuxuuna dagay guri kale oo uu wali dhisme ku socdo.
Magaaladan, oo ku taalla meel u dhow caasimadda dalka Lubnaan ee Beyruut, ayaa muddo sanado ah waxaa ka dhaqan galay xeer dadka masiixiyiinta ah ka mamnuucaya inay hanti ka iibiyaan ama ka kireeyaan dadka muslimiinta ah.
Duqa magaalada ayaa soo saaray xeerkan, waxaana ku raacsan qaar badan oo ka mid ah bulshada magaalada.
George Aoun, waa Duqa magaalada Hadat, wuxuuna yiri: “Go’aankan waxaan qaadannay annagoo eegeyna danaha dadka oo dhan, waxaana ka qeyb qaatay dhammaan shacabka, siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha diimaha, masiixiyiinta iyo muslimiintaba”.
Laakiin kiiskan ugu dambeeyay ayaa dib usoo cusbooneysiiyay doodda la xiriirta in waddanka Lubnaan si aan kala sooc lahayn looga dhaqmo diimaha kala duwan.
Milkiilaha guriga uu dagganaa Maxamed, ayaa raalligalin ka bixiyay arrintan, wuxuuna sheegay inuusan shakhsi ahaan kala jecleyn dadka uu gurigiisa ka iibinayo ama ka kireynayo, laakiin saraakiisha dowladda ay amar ku siiyeen arrintaas.
Xaaska Maxamed ayaa xiriir la sameysay mas’uuliyiinta dowladda hoose, waxaana loo sheegay in mamnuucista hantida laga iibiyo dadka muslimiinta ah ee magaaladaas iyo amarka lagu joojiyay kirada guryahaba ay soo socotay muddo sanado ah.
Hadat waa magaalo yar oo tusaale u noqon karta in dalka Lubnaan uu wali ka jiro hannaanka kala soocista diimaha, arrintaas oo horay sabab ugu ahayd dagaal sokeeye oo waddankaas ka socday muddo 15 sano ah.
Dad ka badan 100,000 oo qof ayaa la dilay intii ay socdeen dagaallada sokeeye ee salka ku hayay arrintaas.
Bulshada masiixiyiinta ah ayaa go’doon ku dhex noqda muslimiinta, maadaama qoysaska muslimiinta ah ay jecel yihiin inay carruur badan dhalaan, sida ay ku doodeen dadka u ol’oleeya xeerkan.
Laakiin dad kale oo aad u dhaliilasanna way ka dhiidhiyeen.
“Waxaa jira dad cabsi ku nool oo halis dareemaya, mamnuucistannna waxaa meesha looga saari karaa oo kaliya amar kasoo baxa dowladda, si muwaadiniinta xuquuqdooda loo simo”, sidaas waxaa yiri Pierre Abi Saab, oo ah wariye u dhashay Lubnaan, isla markaana kasoo horjeeda xeerkan.
30 sano ka hor, magaalada Hadat waxay ahayd meel ay dagan yihiin dad masiixiyiin ah oo kaliya, balse maanta waxaa ku nool dad badan oo muslimiin ah, kuwaasoo halkaas gaaray wixii ka dambeeyay sanadkii 1990-kii, markaasoo uu soo afjarmay dagaalkii sokeeye.
Magaaladan waa meesha kaliya ee mamnuucista noocan ah ay caan ka tahay.
Previous articleAras Amiri, oo ah gabar u dhalatay dalka Iiraan, heysatana daganaanshaha UK ayaa ku guul darreysatay racfaankii
Next articleMaraykanka iyo Taliban oo Heshiis ku Dhow